Nei mapoka eMharidzo mazhinji akananga kunguva yeKutambudzika pachinzvimbo chekuChirayiro cheMuchato?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nei mapoka eMharidzo mazhinji akananga kunguva yeKutambudzika pachinzvimbo chekuChirayiro cheMuchato?
Nei mapoka eMharidzo mazhinji akananga kunguva yeKutambudzika pachinzvimbo chekuChirayiro cheMuchato?
Danieri akaona mufananidzo wemuHedeni wakazopatsanuka kuita makumbo maviri akazopatsanurwa kuita zvigunwe, apo chimiro chedare chakatanga kuipa kubva kumusoro wendarama, isingaiti ngura, kusvikira ava makumbo edare rudzi rwesimbi yakasimba asi haigoni kugara isina kuita ngura.
Makumbo anomiririra kupatsanuka kwechiKristu kuva hushe hweRoma hwakatongwa nekereke yesangano reRoman Catholic, uye Roma yekumabvazuva hwaitongwa nekereke yechiGiriki yemaOrthodox yekuConstantinople yakazopararira ikanomutsa kereke yeOrthodox yekuRussia.
Kwakabva kwauya Rumutsiridzo rwaLuther, nevemasangano anopikisa chiCatholic akabva abuda muCatholic achibva apatsanuranawo kuita masangano akawandisa akasiyana siyana. Tsvagurudzo dzinoti kune masangano emakereke akasiyana-siyana anosvika 45 000 nhasi.
Saka mukana wekuti kereke yenyu ine chokwadi chikamu chimwechete muzvikamu 45000. Hazvina kunaka zvachose.
Parizvino chimbomirai mutarire chimiro chemakereke eMharidzo.
Vakaenda nenzira imwechete yekuparadzana nekupatsanurana. Masangano eMharidzo akawandisa ane maonero akasiyana padzidziso, dzinorwisana zvakasimba zvekuti vatungamiri vazhinji vanodzinga vanovapikisa kupfurikidza kungovaiti kuti vasanzwe vachitambirika mumakereke. Hakuna nhaurirano dzinopera zvakanaka dzinoitwa pamusoro pekusiyana kwedzidziso, asi vanosarudza kusimbisa kutenderana kwavo nedzidziso yemutungamiri mumwe nemumwe. Mapasita emakereke eMharidzo havakurudziri mifungo yechipiri muungano dzavo.
Vanhu vakunzwa vakachengetedzeka kana “vachinzi ndevemukereke yemumwe mufundisi kana pasita”.
I VAKORINTE 1:12 Zvandinoreva ndizvo kuti mumwe nomumwe wenyu unoti: Ini ndiri waPauro, ini waAporo, ini waKefasi, ini waKristu.
Pauro haana kufadzwa nazvo.
Rufu rwemutungamiri akasimba runobvisa namo inenge yakabatanidza nekufukidzira kusatenderana kuri mukati mesangano, sangano remharidzo iroro rinobva rapatsanuka zvakanyanya kubva paraive. Kusiya basa kwekumwe pasita kuAmerica kunoratidza kuti kusiyana kwedzidziso kukuru kwakusvika nzvimbo dzakadzama kwazvo.
Kana misiyano iyi yakakura kudaro, saka vese havangave vachinatsa.
Saka ruzhinji rwemakereke emharidzo haruzove Mwenga waKristu nekuti vese vakasiyana saka vakasiyanawo kubva kusangano rimwechete reMharidzo ringanzi rine rombo rakanaka kuva richinatsa, kana zvichinzi ririko sangano reMharidzo rinogona.
Sangano rimwe nerimwe remharidzo rinoti ndiro rine chokwadi. Asi kutaura uku kurasiswa pamaonero avo, sezvo ese masangano emharidzo akasiyana nezvitendero zvavo zvakawandisa zvakasiyana padzidziso dzakasiyana-siyana vese vanozviti ndivo makereke “ane chokwadi”.
Zvino ndipo panouya mubvunzo wakakosha uye unotyisa kwazvo: Pane chero sangano reMharidzo rine chokwadi chakazara here, kana kuti masangano eMharidzo akangotora nzira dzinoshandiswa nemamwe masangano emakereke, saka nekudaro anova masangano erudzi rumwechete iwo pachawo, zvisinei nekupikisa zvakanyanya kuti havasi vemasangano?
Rangarirai kuti sangano rega rega ritori nedzidziso nezvarinotenda zvechokwadi. Dambudziko riri pane zvimwe zvavanotenda zvisiri zvechokwadi.
Kana tichitonga patiri, tinofanira kutarisa kuti tinoona sei Bhaibheri (King James Vhezheni), nemamwe maonero atinoita hama Branham.
Kuprofita kunoitwa neBhaibheri hakuna zvakanaka zvinotaurwa pamusoro penguva yedu yekupedzisira.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikia uti;
ZVAKAZARURWA 3:20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza.
Kristu akamira kunze kwekereke achigogodza. Makereke ese. Izvi zvinofanira kusanganisa makereke ese emharidzo zvakare, nekuti haana kereke yaakasiya. Saka zvinosanganisa boka renyu remharidzo nerandinobatawo ndiri neni.
Kristu ndiye Shoko. Saka Shoko raMwari rakanyorwa harichaparidzwi mumakereke. Verengerai mufundisi kana kuti pasita vhesi reBhaibheri rinorwisana nemaonero ake, nekukasika munozviona madzingwa mukereke imomo. Shoko raMwari rakanyorwa harichatambirwi mune zvimwe zvikamu.
ZVAKAZARURWA 3:16 Zvino zvaunodziya, usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu.
Kereke haichapisa kana kutonhora. Mamwe Magwaro anoparidzwa (zvinotiita vanopisa), asi izvi zvinosanganiswa nemamwe Magwaro asisaparidzwi kana kuti anorwiswa (zvinotiita vakatonhora).
Shoko raMwari rinobva mumuromo make. Saka hatisisiri mumuromo maMari. Hatichamiri neShoko rake, hatichazvinetse nekutsvaga kuti chii chakanyorwa muBhaibheri. Kuturikira zvakataurwa nevanhu ndiko kwatora mukombe.
Chinhu chinodakadza pakutarisa chokwadi kusarudzwa kwaDonald Trump. Vaparidzi veMharidzo vakaturikira zvakataurwa, vakafanotaura kuti Hillary Clinton aizokunda pasarudzo. Vakatadza fungidziro dzavo zvakazara. Ndiko kuita kwekuvimba nezvakataurwa nevanhu. Vakaita zvimwechete nekufungidzira kuguma kweAmerica muna 1977. Vaive vachiturikira zvakataurwa zvakare.
Zvisinei nekutadza pafungidziro dzavo dzinobva pakuturikira zvakataurwa zvikuru zvakadai, vanoramba vari pamusoro, vachiramba vachingoturikira zvakataurwa. Ungano dzisingagoni kupikisa zvataurwa nevakuru dzinongoenderera mberi sepasina zvakaitika.
Vaparidzi vemharidzo vaitsigira Hillary vakabva kare pakufunga kwaMwari. Takayambirwa. Asi hatikoshesi yambiro. Tinoenderera mberi kuteerera kuturikira kwavo kwavanoita zvakataurwa, vatungamiri ava vanoramba vachitirasisa. “Chichechi-chechi” chinoenderera mberi semazuva ese, zvisinei nekuti Trump akapotsera pazviso zveku chokwadi, chekuti vatungamiri vemakereke edu havazivi kuti Mwari anofunga sei.
ZVAKAZARURWA 3:17 .... handishaiwe chinhu, usingazivi, kuti ndiwe unovurombo nenhamo, ... nebofu:
Makereke emharidzo anofunga kuti havadi chiro, kunyanya kugadziriswa.
Kereke ibofu (kereke yenyu neyangu) nekuti ziso risingaoni harigoni kuona chiedza. Saka makereke ese nhasi achiziva kana kusaziva ari kuramba chimwe chokwadi cheMagwaro. Eva akangoramba Gwaro rimwechete chete akawira muchivi. Asi kereke imwe neimwe yemharidzo inodaidzira kuti haisi bofu. Kuti ivo vega ndivo vane chokwadi. Ndicho chikonzero nei vasingagazirisiki, nekuti vanovimba kuti vanogona zvese.
Makereke emharidzo (zvese nemamwe makereke emasangano ese) anozvitutumadza pamusoro pezvinhu zvakanaka zvese zvavanoitira Mwari. Izvi zvese zvakanaka. Asi Mwari paanotaura pamusoro peRaodikia haarumbidzi nguva yedu, asi anoti tinofanira kutendeuka. Izvi zvinoreva kuti tiri kuita zvinhu zvisina kunaka. Anoti tinofanira kushingairira kutendevuka. Zvinoreva kuti tiri kuita zvakawanda zvakaipa.
ZVAKAZARWA 3:19 Vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova; naizvozvo shingaira utendevuke.
Kana Mwari achitida, anoti achatiranga nekutirova. Tinofanira kunge tichiita chimwe chinhu chakaipa kana achida kutiranga. Tinenge tichiita chinhu chakaipisisa kana achida kutirova. Asi isu tinofunga kuti takanaka uye tiri munzira. Saka tine chimwe chinhu chikuru chatiri kupesana nacho.
Saka chii chatiri kutadza, sezvo tichiramba tichiti “kereke yedu ine chokwadi? Munhu wese anoti vanogona vane chokwadi zvisinei nekusiyana kwavo, zvinoreva kuti hakuna achiri kuda kugadziriswa.
Mwari haatauri kuti tinotaura zvinhu zvatisingagoni kuzadzisa.
Anongotaura kuti chinhu chatinofanira kunyanya kukoshesa ndiko kutendeuka. Nekuti hatizivi chatiri kutadza, anotiudza kuti titenge chizoro chemeso kuti meso edu azaruke kuti tione patinotadza. Ipapo tinobva taziva zvatinofanira kutendeuka kubva kwazviri.
ZVAKAZARURWA 3:18 ... nechizoro chameso, kuti uzore meso ako, uvone.
Asi tinosarudza kugara mukuchengetedzwa kwatinoitwa nemasangano akatipoteredza, uko mapasita edu asingabvumi kuti anotadza vanotiudza kuti tiri pakanaka kana tikaramba tichitenda kune zvavanotaura. Tinoramba chero munhu anobva kunze kweungano yedu anopikisana nesu, saka nekudaro hatigadzirisiki. Hatitodi kugadziriswa nemunhu anobva kunze.
Pachokwadi, tinotya kwazvo kutsigira zvatinotenda, zvekuti hatidi kusangana nechoro munhu asingatenderane nesu nekuti tinoziva kuti hatizoiti basa rakanaka rekuburitsa pachena zvatinotenda. Saka tinosarudza kugara muungano matinotenda zvakafanana. Nenzira iyoyo hatina anotipikisa, uye kusaziva kwedu Magwaro kunoramba kwakavanzwa.
ZVAKAZARURWA 3:17 Nokuti unoti, ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi chinhu, usingazivi kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usine-chokufuka.
Hatishaiwi chinhu. Tinovimba nebudiriro munezvemari nehupfumi kuti tiratidze kuti tiri pedyo naMwari. Izvi zvinoreva kuti tinofunga kuti tiri pakanaka, uye zvese zvedu zviri mugwara rakanaka. Saka tinonzwa mumoyo yedu ichiti hatingateereri chero munhu ari kunze kwesangano redu sezvo tisingade chiro kana kugadziriswa. Asi tinokwanisa chete kuedza “kwevurombo” kutsigira zvatinotenda neBhaibheri. Vanhu vazhinji vanotenda kuMharidzo vanotozvitutumadza nezvishoma zvavanoziva muMagwaro. Mutongi weSiria akateerera Firipi, mutorwa, akaita chinhu chakanaka. Saka hatisati taziva kuti Mwari ari kuda kuti titendeuke mune zvipi, kana kuti nei ari kutiudza kuti titsungaire uye tizvideredze pakubvuma kwedu kuti tinotadza patinotendeuka. Hakuna vanotenda kuMharidzo vanotenda kuti Mwari ari kunze “kwechechi yavo”. Hakuna vanotenda kuMharidzo vanotenda kuti mapofu, zvisinei nekuti Bhaibheri rinotaura munguva yedu yatiri kurarama yekupedzisira kuti tiri mapofu, asi hatizvizivi. Saka anoramba ari kunze kwekereke yedu. Isu tinoramba mukusaona kwedu tiri munzira dzedu mukati, tichifuratira mamwe Magwaro nekuti anorwisana nezvimwe zvatinotenda mazviri.
Uye vatungamiri vedu vanotidzikisira kubva pakutsvaga zvakaipa, nekuti vanodzinga vapikisi, votipa tariro yekuti tese tiri kunatsa kana tichingotevera zvatinoudzwa nevanhu vanotitungamirira, avo zvisinei, zvichibva muMagwaro, vanongoriwo mapofu sezvatiri.
MATEO 15:14 Varegei, mapofu anotungamirira mapofu. Zvino kana bofu richitungamirira bofu, achawira mugomba ose ari maviri.
Vatungamiri pavanoparidza zvakataurwa nevanhu pachinzvimbo chekutsigira zvavanotenda neMagwaro, vanenge vari mapofu padzidziso idzodzo. Vateveri vavanotungamirira, vanofara kutevera kuturikira kunoitwa zvakataurwa nehama Branham nevatungamiri vavo, mapofu wo nekuti ivo pachavo havachagona kutsigira zvavanotenda neMagwaro. Vose vachawira mugomba, rinova nguva yeKutambudzika kukuru iri kuuya.
Panodzoka Jesu, kuchave nevashoma kwazvo vanotsigira zvavanotenda neMagwaro.
Kutenda kune zvakanyorwa muBhaibheri ndiro rega tsime rechokwadi.
Vanotenda kuMharidzo vave kuvimba nemazwi akabatwa paitaura hama Branham nevamwe vanhu uye kuturikira kwavanoita zvakabatwa izvozvo hakugoni kutsigirwa neMagwaro.
Vakatoshandura zvakare “izwi remutumwa wechinomwe” (rakavimbiswa kunguva yedu) kuriita “Izwi raMwari”. Kusimudzirwa kwemunhu uku hakuna kuvimbiswa kwatiri kunaZvakazarurwa 10:7.
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, (iri harisi “izwi raMwari” zvachose).
Zvino kune kurwadzisana kukuru apo vanozvidza vanemaziso-akapinza, vanoramba kushandiswa nevafundisi vanongomweta-mweta, vakanongedzera zvakakanganiswa nehama Branham. Izvi zvinoburitsa pachena kuti hama Branham vaitadza. Kuburitswa pachena kwezvakakanganiswa izvi kwakabereka miono miviri yakakosha kwazvo.
Chekutanga, vadzidzi vehama Branham vaive vakazvipira kwazvo vaitaura zvine huturu kwazvo kuti haatadzi. Vaive vasimudzira zvaaive ataura kusvika pachinzvimbo cheMagwaro, uye kutodarikawo Magwaro. Saka, vachifunga kuti vaichengetedza hama Branham, vaitopa vazvidzi vavo simba guru. Hamugoni kureverera chakakanganiswa.
Torai semuenzaniso: mharidzo “Mbeu (Mwana) wemhuka yakazoshandurwa kuitwa nyoka”.
58-0928E MBEU KANA MWANA WENYOKA
Kereke yekutanga yemasangano... tambotarisana nayo masikati ano pasi “pemadzibaba eNecene,” nhorondo yekereke yeNecene. Mumashure mekufa kwemapostora, kwakauya madzibaba eNecene, vakaenderera mberi kwemakore akati kuti (makore mazana matatu nemakumi maviri nemashanu) vakazosvika kuNecaea, kuFrance, kwavakaita kanzuru huru yeNecene. Ikoko ndiko kwavakatanga dzidziso idzi dziri mukereke yeCatholic izvozvi, idzo dzakapihwawo kuvapikisi vayo vakabuda mairi.
Sezvandataura pakudzidzisa mangwanani ano, imwe neimwe yenguva idzodzo dzemakereke kusvika panguva yekereke yeTesaronika, makore mazana gumi nemashanu enguva yeRima, hakuna kuita kana nguva imwe asi zvaakataura kuti, “Muchiri neZita rangu.” uye kune rumwe rutivi urwu , vaive vasisiri muna Kristu akanga abuda mumakereke emasangano emazita : Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecost, zvichienda zvakadaro. Asi nguva iyi isati yapera akataura kuti “Ndakaisa pamberi penyu mukova wakazarurwa.” mazviona? Ndiyo nguva yatinotenda kuti tiri kurarama mairi nhasi uno, nguva yemukova wakazarurwa, pakati pekuenda kwekupedzisira kwekereke yeRaodikia.
Uye makore akakwana mazana matatu nemakumi maviri nemashanu kukanzuru yeRaodikia.
Mune kukanganisa kunokwana kuna mundima duku iyi. Kuedza kureverera zvakakanganiswa apa kunoguma kwaita kuti tireve nhema.
Necaea haisi muFrance, iri muAsia Mino, kuzasi kweConstantinople.
Hakuna nguva yekereke yeTesaronika. Kwaive nenguva yekereke yeTiyatira kubva munana 606 AD kusvika munana 1520 AD. Yaive Nguva yeRima.
Nguva dzeRima dzakaita makore anoda kukwana 900. Dzakazopera makore akapoteredza 1500 AD. Kana nguva dzerima dzakatora makore 1500, zvinoreva kuti Jesu aive munguva yeRoma.
Hakuna kuitika kanzuru yeRaodikia muna 325 AD. Yaive kanzuru yeNecaean. (Kanzuru yeRaodikia yakasangana kubva muna 363 – 364 AD ikasiya Bhuku raZvakazarurwa kunze kweBhaibheri.
Saka kukanganisa uku kunoda kugadziriswa toenderera mberi. William Branham aive asiri munhu asingatadzi. Tarisai zvaakataura moona kuti zvese zvinotenderana here neMagwaro, nhorondo nenzvimbo dzenyika pasi pano.
Iyi iyambiro kwatiri tese. Musafunge kuti mune chokwadi nekuti mune zvamakabata paitaurwa zvamakarembera pazviri. Zvimwe zvamunobata panotaurwa zvinenge zvisiri izvo.
Vaparidzi vemharidzo vakatora kodzero dzekuturikira kana kugadzirisa zvaakataura, saka vakaramba vakarembera pakukanganisa kwavo kwekuturikira zvaakataura, sekuti “Kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako” uye “gore remuna 1963 kwaive Kuuya kwaShe”, kana kuti “Gore rakaonekwa muna 1963 kwaive kuuya panyika kwemutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10”. Asi izvi hazvina kubvura zvataurwa nehama Branham. Aive asati atomboenda kunovhima kumakomo eSunset Peak pakatorwa mifananidzo yeGore, sezvo nguva yekuvhima yive isati yazarurwa. Akazosvikako nguva inoda kukwana vhiki mumashure mekutorwa mifananidzo kwakaitwa Gore. Gore harina kubvira raenda pamusoro pemakomo eSunset Peak, raive mamaira mazana maviri kumusoro kwawo, munzvimbo dzeguta reFlagstaff kumusoro kweArizona.
Chechipiri, mumwe muono mukuru ndewekuti hama Branham vakasimudzirwa zvakanyanya kudarika kuva mutumwa wechinomwe kana kuti muprofita wenguva yekupedzisira. Kune zvikonzero zviviri pane izvi.
Mharidzo dzake nemabhuku zvakushambadzwa sekuti ndiye ‘Izwi raMwari”. Izvi zvinomusimudza kumuisa pamusoro-soro, asi zvisingagoni kuyananiswa nechero Magwaro, kana nekukanganisa kwaakamboita. Mwari haatadzi saka iye ega haakanganisi.
Takavimbiswa ‘izwi remutumwa wechinomwwe”- hatina kuvimbiswa “Izwi raMwari”.
Saka kusimudzirwa kwake kusingabvi muMagwaro kunobereka mafungiro akakanganisika.
Rangarirai, Mwari akavenga tsika dzavaNikoraiti vanosimudzira munhu mutsvene.
Nebukadinezari akaita mufananidzo waDanieri munguva yevaHedeni yekutanga, akamanikidza vanhu vose, kunze kwaDanieri, kuti vapfugame vaunamate. Danieri zvaive pachena kuti aisazonamata mufananidzo wake.
DANIERI 3:12 Zvino vamwe vaJuda vari’po, vamakagadza vave varairi vezvinhu zvose zvenyika yeBabironi, vanaShadraki, naMishaki, naAbedi-nego; varume ava, havana-kuva nehanya nemi, imi mambo; havashumiri vamwari venyu, kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa.
DANIERI 1:7 Muchinda wavaranda wakavatumidza mazita, Danieri wakamutumidza kuti Berteshazari;
DANIERI 2:46 Ipapo mambo Nebukadnezari akawira pasi nechiso chake, akanamata Danieri, akaraira kuti vamuvigire chipo, nezvinonhuwira zvinozipa.
Uku ndiko kutadza kukuru kuri mumaHedeni, kunamata muprofita, uye kusimudzira Danieri kumuita mwari.
DANIERI 4:8 Asi pakupedzisira Danieri wakavuya pamberi pangu, iye unezita rinonzi Berteshazari, wakatumidzwa nezita ramwari wangu, unomweya wavamwari vatsvene mukati make:
Saka nhorondo inodzokororwa, munguva yevaHedeni yekupedzisira vanhu vari kumanikidzwa kupfugamira zvakabatwa paitaura kana kuti zvinoturikirwa pamusoro pezvakataurwa nehama Branham, muprofita wedu wenguva yekupedzisira. Zvakabatwa paaitaura, nekuturikirwa kwazvo, zvakasimudzirwa kusvika padanho rimwechete neMagwaro, uye dzimwe nguva vanhu vanotozvisarudza pachinzvimbo cheMagwaro. Izvi ndizvo chaizvo zvakaitwa nekereke yeRoman Catholic nezvinyorwa zvemadzibaba ekereke yavo uye kanzuru yavo. Zvirevo uye zvinofungwa nevanhu zvakatora nzvimbo yeMagwaro.
Jesu akadzosera Satani kumashure nekutaura kuti “Zvakanyorwa zvichinzi”. Vashoma kwazvo nhasi vanotora muenzaniso wake.
Kuburitswa pachena kwenguva Nomwe dzeMakereke. Nguva yekereke yeEfeso. Mbeu yevaNikoraiti
Nguva dzose Mwari vanopa kushanya kweMweya Mutsvene vanhu vosunungurwa, mumashure mechinguvana vanozvisungirira pakare pachinhu chavakambobviswa kwachiri. Luther paakabuda muchiCatholic, vanhu vakasunungurwa kwechinguvana. Asi paakafa, vanhu vakaronga zvavaifunga kuti aitenda mazviri vakaita dzavo dzidziso nepfungwa vakatanga kudzingira kure wese aitaura zvaipikisana navo ...
Oh, hongu! Kuna Zvakazarurwa 12, mhombwe iya yaive nevanasikana vakawandisa. Vanasikana ava vakangoita saMai vavo. Vanoisa Shoko parutii, vachiramba mabasa eMweya waMwari, vachimanikidza ungano, vachiita kuti zviomere ungano kunamata Mwari kunze kwekunge vauya nekwavari kana vavanobata navo, chinhu chisina kusiyana nekusatenda zvachose kunobva kuna Satani pachake ....
Vateveri vaMartin Luther vakaronga zvavaifungidzira kuti aitenda mazviri, vakagadza pfungwa dzavo.
Vateveri vaWilliam Branham vakarongawo zvavanofunga kuti aitenda mazviri vakagadzawo pfungwa dzavo.
Aya ndemamwe mazano asiri muMagwaro asina kubvira ataurwa nezvawo naWilliam Branham. Asi zvakadaro vakawanda vanomutevera vanotenda mazviri.
“Kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako”.
“Tinoziva Zita idzva raJesu”.
“Nguva yeNyasha yakadarika, kunze kwekuMwenga waKristu chete”.
“Johane akapfugamira William Branham pakupera kweBhuku raZvakazarurwa”.
“Gore rakaonekwa muna 1963 kwaive kuuya kweMutumwa wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 1o”.
Zvese izvi “zvinhu zvakagadzirwa nevanhu” zvine chinhu chimwechete chazvakafanana – hama Branham haana kubvira ataura chero chimwechete chazvo. Saka vanotenda mune izvi vane chitendero chehaibhuridhi.
60-0515M MAMBO AKARAMBWA
Saka pavakaita izvozvo, panouya kukundwa kukuru, Sauro anotema nzombe huru mbiri odzitumira kuvanhu vose. Ndinoshuvira kuti muone chimwe chinhu pano. Sauro paakatumira zvidimbu zvenzombe kuIsraeri yose akati, “Regai munhu wese asingatevere Samueri naSauro, muregei, nzombe iyi ive seizvi.” Muri kuona kuti akaedza kunyegera zvakadii paaiedza kuzviratidza pamunhu waMwari? Kuti zvaive zvisiri zvaKristu sei. Kutya kwevanhu kwaive nekuda kwaSamueri. Asi Sauro akavaita kuti vese vamutevere, nekuti vanhu vaitya Samueri. “Varegei vatevere Samueri naSauro”.
Nhasi mapasita anomanikidza vanhu kutevera zvavanoturikira pane zvakataurwa nehama Branham. Vanhu vanofunga kuti hama Branham vakataura izvozvo saka ivo vanofanira kutenda mazviri.
Ndicho chikonzero nei mharidzo yaWilliam Branham yakapatsanurana kuva dzidziso dzinorwisana zhinji. Boka rega rega rine chitsama chezvaakataura zvarakabata, zvavanoturikira nenzira yavo yakasarudzika. Bvunzai mumwechete wavo kuti atsigire zvaanotenda neBhaibheri, ndipo panowanzobva paperera nhaurirano ipapo, nekuti vanoziva kuti havagoni kuzviita.
Zvirevo zvevanhu zvinokwaisa kuva zvichidakadza kana kuyevedza, asi zvakanyorwa muBhaibheri chete ndizvo zvinoraira kutenda kwangu.
Mumazuva aEnoki, Mvura yaNoa isati yauya, Enoki ega ndiye akakunda. Munhu mumwechete chete. Ndiye ega munhu pasi rese akakwira kudenga nguva yekutambudzika yemvura yaNoa isati yatanga. Saka Mwari anotevera zvinhu zvakanaka kwete huwandu.
Jesu akaparidza yambiro kuti kutorwa kukwira kudenga kwekereke, saEnoki, inyaya yemunhu mumwe nemumwe.
RUKA 17:34 Ndinoti kwamuri: Vusiku ubwo varume vaviri vachava panhovo imwe, mumwe uchatorwa mumwe uchasiiwa.
35 Vakadzi vaviri vachakuya pamwechete, mumwe uchatorwa mumwe uchasiiwa.
36 Vaviri vachava kumunda, mumwe uchatorwa mumwe uchasiiwa.
Zviitiko izvi zvinoita senguva dzakasiyana pazuva. Kuuya kwaShe kuri muchiitiko chimwechete mukati menguva. Saka mienzaniso iyi inomiririra nzvimbo dzakasiyana pasi rese. Mumwe munzvimbo ino mumwe mune imwe nzvimbo. Havasi vazhinji vachaenda.
ISAYA 1:9 Dai Jehova wehondo asina-kutisiira vakasara vashoma shoma, tingadai takafanana neSodoma takaita seGomora.
Aimbova mutungamiri wenyika yeAmerica Obama akashandisa chinzvimbo chake kuparidzira kodzero dzechingochani. Kusimuka kwekodzero dzechingochani kunongozadzisa chiprofita ichi.
Vanhu vashoma-shoma vacharamba vari pachokwadi cheMagwaro.
2 VATESARONIKA 2:3 Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nomutovo upi noupi; nokuti harisviki, kana kutsauka kusati kwatanga kuvuya, nomunhu wezvivi, mwanakomana wokurashika, asati ambovonekwa.
Pakanzuru yeNecaea muna 325 AD dzidziso yeTiriniti yakapinda mukereke, chokwadi chikavigwa ipapo. Nguva yeRima yakatevera kwaive kurasika kunosuwisa kubva padzidziso yemapostora. Luther akabva asvika muna 1520 AD nedzidziso yekuponeswa nekutenda, Wesley muna 1750 AD akasvika nedzidziso yehutsvene uye kuparidzira, uye vePentecosti muna 1906 AD vakauya nekudzoswa kwezvipo zvemweya. Vakatanga kudzosera kereke kudzidziso dzevapostora.
Hama Branham vakazivisa Zvisimbiso zvinomwe muna 1963 kuti vapedzise zvakavanzika zvaMwari, Bhaibheri. Vakazivisa zvatinoda kuziva kuti tigadzirire Kuuya kwechipiri kwaJesu. Taifanira kudzosera zvaakataura kuBhaibheri, totsigira kutenda kwedu neMagwaro. Asi mumakore makumi mashanu mumashure mekufa kwake, vanotenda kumharidzo vakabvawo paMagwaro nerudo rwavo rukuru rwekuzivisa zvinhu zvisina kunyorwa muMagwaro, zvakaita seKutinhira kunomwe, Chisimbiso chechinomwe, Kuuya kwaShe, neZita idzva raJesu.
Saka masangano emharidzo vakabvawo pakutevera Magwaro mune zvavanotenda.
MATEO 7:14 Nokuti suvo rakamanikana, nenzira inhete, inoenda kuvupenyu, vanoiwana vashoma.
Nguva yatinongotenda zvisiri muMagwaro, tinobva tabuda munzira yakamanikana. Tinobva taenda neruzhinji, asi nzira iyoyo akananga kumawere nguva zhinji.
EZEKIERI 14:14 Kunyange vanhu ava vatatu, Noa, naDanieri naJobo, vakava’mo, ungarwira mweya yavo voga nokururama kwavo ndizvo zvinotaura Ishe JEHOVA.
Danieri, Jobo, naNoah vaigona chete kuzviponesa ivo. Noa haana kukunda pakukwira kudenga nguva yeMvura zhinji isati yakwana. Saka hwaro hupi hunodiwa naMwari paMwenga wake? Hwaro hwepamusoro -soro.
Mwari haadi munhu anomira pakati pake neMwenga wake. Mwari haadi chero nhengo yeMwenga wake kuti iteerere chero munhu nemifungo yake. Munhu ane kodzero dzekuparidza chete kana achiti, “Zvakanyorwa zvichinzi ...” ipapo tinenge tichitevera Bhaibheri, kwete munhu.
VaNikoraiti vakasimudzira munhu mutsvene pamusoro peungano, izvi zvaivapa hukuru hwavaida kwazvo.
Deotrefe aive wekutanga wevakuru vakadaro. Aive nesimba rekudzingira vanhu kunze kwekereke. Aive nesimba rekudzinga Johane – akanyora Magwaro kuti asasvike zvakare. Aitaura makuhwa pamusoro pake. Semutungamiri wekereke aisada munhu aitevera Magwaro saJohane kuti amugadzirise dzidziso dzake.
3 JOHANE 1:9 Ndakanyorera kereke; asi Deotrefe, unoda kuva mukuru pakati pavo, unotiramba isu.
10 Naizvozvo, kana ndichivuya, ndichayevudza mabasa ake aanoita, kuti anotiitira makuhwa namashoko akaipa; vuye, haatendi naizvozvo bedzi, iye amene haagamuchiri hama, vuye vakanga vachida havo unovadzivisa nokuvadzinga mukereke.
Uyu ndiye muenzaniso wakanakisa unoteverwa nemapasita anhasi eMharidzo.
Shoko raMwari rechokwadi rinokudzingisai mukereke.
Saka Testamente Itsva isati yapera kereke yaive yatotanga kuipa nekuda kwehutungamiri hwevanhu. Nhasi, munhu ane simba rekudzinga vanhu mukereke ndipasita asi simba rina pasita pamusoro pekereke haana kuriwana kubva muMagwaro, sezvo shoko rekuti “mufidzi” rinoreva pasita rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva. Hakuna Magwaro anotaura kuti mufudzi rinomiririra pasita ndiro zvakare mufudzi rinonzi shepadhi muchirungu. Saka zvimiro zvemakereke edu hazvitsigirwi neMagwaro. Kuwedzera kuipa kwazvo, pasita anozviti ndiye musoro kana mutungamiri wekereke. Ndicho chimwe chikonzero nei Kristu, Musoro chaiwo wekereke, akamira kunze kwekereke. Hakuna muviri wevatendi unokwanisa kuita misoro miviri.
Tarisai chinhu chiri kunyanya kutaurwa nezvacho kwekupedzisira kweBhaibheri, mumabhuku matatu ekupedzisira.
Mwadhi yaJohane yechitatu inotiyambira pamusoro pevatungamiri vekereke vakaita saDeotrefe aida kuva mukuru pakati peungano. “Tarirai ini. Ndakakosha. Ndiri pamusoro pako. Tererai ini kana kuti”. (Izvi zvinoita sezvinogarotaurwa nevafundisi kana mapasita nhasi uno).
Izvi zvinoteverwa naJudasi anotiyambira kuti tirwire kutenda kwekutanga kwakaitwa nevapostora.
Judasi 3 Vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose, ndakavona kuti ndinofanira kukunyorerai ndichikurairai kuti murwire kwazvo kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe.
Judasi anotiyambira pamusoro pevatumwa vakarasika kubva pakutanga, maguta eSodoma neGomora, Kaini akanyepa akauraya, uye mutungamiri aive achirwisa Baramu, aida mari zhinji, naKora aida hutungamiri. Kunoperera mharidzo kweBhaibheri kunoramba kuchidzokera pamifungo yakavora, inoparidzwa nevatungamiri vanotonga vanhu.
Ndiwo maperero anoita Bhaibheri tisati tasvika paBhuku raZvakazarurwa, apo Satani anotasva mabhiza matatu anozobatana kuita bhiza rechina rakachenuruka, rinozotungamirira nzira nehunyengeri hwemweya “hwechichechi-chechi” nevatungamiri vacho vemakereke, simba rezvematongerwo enyika revanhu vanotonga ungano, uye kuita mari kubva paEvangeri. Kwese kunyengera kutatu uku kunobatana pakupedzisira kuti kubereke rufu munguva yeKutambudzika kukuru.
Saka dambudziko redu guru riri pavatungamiri vemakereke vakasimudzirwa, uye vanhu vemasangano avo vakafonyorwa pfungwa vanotya kupikisana nevatungamiri vavo.
ZVAKAZARURWA 1:9 Ini Johane, hama yenyu, mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika
Johane akabva atanga kunyanya kutarisana nevatungamiri vane huwori zvekuti muBhuku raZvakazarurwa akazvizivisa sehama. Kwete semukuru. Kwete semupostira. Haana kubvira aedza kuzvisimudzira pamusoro pedu.
Akabva azopedzisira nekukanganisa kukuru. Kuwira pasi kuti anamate muprofita akazivisa zvinhu izvi kwaari.
ZVAKAZARURWA 19:10 Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake, kuti ndimunamate. Akati kwandiri: Rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwechete newe,
Ndiko kuita kwesimba remweya wakaipa, unotiita kuti tinamate vaprofita.
Uye, mumashure mekutsiurwa, Johane akazviita zvakare.
ZVAKAZARURWA 22:8 Ini Johane ndini ndakanzwa , ndikavona izvozvo. Zvino ndakati ndichinzwa, nokuvona, ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvo.
9 Akati kwandiri: Rega kudaro; ndiri muranda pamwe chete newe, nehama dzako, vaprofita, navanochengeta mashoko ebhuku iyi; namata Mwari.
Saka pakunopera kweBhaibheri pakaitika kunamatwa kwemuprofita. Ichi chimiro chakaipa. Tinonzi tichengetedze zvinhu zvakanyorwa muBhaibheri. Hatitenderwi kusimudzira kana kunamata muprofita.
Kereke yakabva panzira yaifambiswa nayo zvinhu muTestamente Itsva. Haichagari iri pakuti “Zvakanyorwa zvichinzi”.
Takagamuchira pfungwa dzemasangano dzakati kuti nenzira dzaanoita nadzo zvinhu, kunyanya pahutungamiri hwekereke.
Tinoda mufundisi kana pasita kuti atitungamirire uye atiudze zvekuita. Ndiwo maitirwo azvinoitwa nemamwe makereke.
Tarirai kuraira kwaPauro.
MABASA 20:17 Zvino iye ari paMireto, akatumira Efeso kundodana vakuru vekereke.
MABASA 20:28 Zvichenjerei imi neboka rose ramakaitirwa vatariri varo noMweya Mutsvene, kuti mufudze kereke yaMwari, yaakatenga neropa rake.
Petro akataura chinhu chimwechete ichi. Akazvidaidza kuti mukuru paaitaura nevamwe vakuru. Hapana kutaurwa pamusoro pakuzvidaidza kwake kuti “mupostora”, kuti aite kunge aizviisa pamusoro pevamwe vakuru.
I PETRO 5:1 Naizvozvo ndinoraira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwechete navo nechapupu chamadambudziko aKristu, nomugovani navo wokubwinya kuchazoratidzwa, ndichiti:
2 Fudzai boka raMwari riri pakati penyu, musingazviiti nokurovererwa, asi nomoyo unoda nokuda kwaMwari, musingazviiti nokuda kwekukarira fuma yakaipa;
3 Musingaiti nesimba nezvamakagoverwa, asi muve vatungamiriri veboka.
Hushumiri hwemabasa mashanu muMagwaro hahuna kubvira hwasimudzirwa pamusoro pevamwe vanhu vose. Vaingova chikamu cheboka revakuru.
1 TIMOTIO 5:17 Vakuru vanobata kereke zvakanaka ngavanzi vanofanirwa nokukudzwa kaviri, zvikuru avo vanobata pashoko napakudzidzisa.
Vamwe vakuru vaiparidza, sechikamu chemabasa mashanu muhushumiri, vamwe vaisaparidza, asi vakuru vose vaive vakaenzana, sezvo vese vaive vakuru.
Vakuru vaitungamirira kereke panzvimbo.
VAHEBERU 13:7 Rangarirai vatungamiri venyu vaikuparidzirai shoko raMwari, cherechedzai kuguma kwekufamba kwavo, mugotevera kutenda kwavo.
Kwaive kusina hutungamiri hwemunhu mumwechete mukereke. “va” zvinoreva kuti vakawanda, pakutaura pamusoro pevatungamiri.
VAHEBERU 13:17 Tererai vatungamiri venyu, muzviise pasi pavo, nokuti vanorinda mweya yenyu, savanhu vanozobvunzwa pamusoro penyu, kuti vaite izvozvo nomufaro, vasingaiti neshungu; nokuti izvozvo hazvikubatsiriyi chinhu.
Chikwata (kana boka) revakuru raibata kereke panzvimbo.
VAHEBERU 13:24 Ndikwazisirei vatungamiri venyu vose navatsvene vose. VeItaria vanokukwazisai.
Uku kwaive kuItaria kwaizosimuka Pope anozodzvanyirira vanhu. Pauro aikoshesa kuti vatungamiri vabate basa vari chikwata. Kwaive kusina hutungamiri hwemunhu mumwechete. Pasina hudzvanyiriri hwemunhu mumwechete. Itaria payakatanga kuisa munhu mumwe pakubata kereke imwechete, vakapedzisira vave naPope pamusoro pavo. Yaive isiri nzira yakanaka kufamba nayo.
57-0908M VAHEBERU CHITSAUKO CHECHISHANU NECHECHITANHATU 1
Asi ndinovimba muhukuru hwesimba rekereke yepanzvimbo.
Hongu. Regai kereke imwe neimwe izvimiririre, isarudze vafudzi vayo, varanda vayo, va, chero zvavanoda. Zvino nenzira iyoyo, vanhu vanenge varimo havazoiti bhishopu mumwechete pamusoro pavo. Mweya Mutsvene unoda kureva chimwe chinhu kukereke iyoyo, havangatongobvunzi chero munhu kuti vangaite izvi kana izvo here. Munhu mumwe nemumwe anenge achisangana naMweya Mutsvene.
Ndiratidzei neBhaibheri kuti chikuru chii, muBhaibheri, chinopinda mukuru kukereke panzvimbo?
Ndizvo chaizvo, hongu, baba, rusununguko rwekereke yepanzvimbo, kereke imwe neimwe yakazvimiririra. Zvino, hukama, ndizvo zvakanakisa. Makereke ese anofanira kuva nehukama hwakadaro, pamwechete. Asi rusununguko rwekereke yepanzvimbo!
I PETRO 2:9 Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vuprista bwamambo.
MuTestamente Yekare kwaive nehuprista hwaive hwakasimudzirwa pamusoro pevanhu. Hakusisina chinhu chakadaro muTestamente Itsva. MuKristu mumwe nemumwe chikamu chevuprista. Munhu mutsva chaiye angori muprista sezvingori muKristu ararama zvakanakisa kwenguva refu. Tese takaenzana pamberi paMwari.
I PETRO 2:17 Kudzai vanhu vose. Idai hama dzose.
Petro akaisa kukosha pakuenzana kwevanhu vese. Aikoshesa hukama.
MuTestamente Itsva, hakuna kwakabvira chimwe chezvinzvimbo zvehushumiri hwemabasa mashanu (kunze kwehushumiri hwemuprofita) chakabatanidzwa nezita. Uye maprofita matatu chete emuTestamente Yekare akataurwa.
Bhaibheri rinoti “Pauro mupostora”. Harina kubvira rataura kuti “Mupostora pauro”.
Bhaibheri harina kubvira rataura pamusoro “paPasita Nhingi”. Kana mukataura nemunhu muchimuti “Pasita Bill” kana kuti “Mupostora Jimi”, munenge muchirasika kubva paMagwaro. Izvozvo zvinoreva kuti munenge musati madzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga.
Saka kereke yekutanga yaitungamirirwa nevakuru.
MuTestamente Itsva, vanhu vatatu chete kubva muTestamente Yekare ndivo vakataurwa nechinzvimbo chekuti muprofita chakabatanidzwa nemazita avo: Muprofita Isaya, Muprofita Jona, uye Muprofita Joere. Hakuna muprofita airarama akadaidzwa kuti “Muprofita Nhingi”. Saka kubatanidza chinzvimbo nezita remunhu kuti mumusimudzire yaive isiri tsika yemuTestamente Itsva.
MATEO 21:11 Vanhu vazhinji vakati: NdiJesu muprofita weNazareta reGarirea.
Chero Jesu aive asina chinzvimbo pazita rake chekuti “Muprofita Jesu”. Aigutsikana kudaidzwa kuti “Jesu muprofita”.
Saka rudo rwedu rukuru rwekudaidza munhu kuti “Pasita Johane’ harubvi muMagwaro zvachose!
Kuzviipisa zvakanyanya, mumaBhuku edu mana eEvangeri, paaive achiri mupenyu, Jesu haana kubvira aita zita rechinzvimbo raive rakabatanidzwa nezita rake asati amuka kubva kuvakafa. Aingodaidzwa kuti Jesu. Havana kubvira vamudaidza kuti “Ishe Jesu”, zvisinei nekuti vaimugamuchira saShe wavo.
RUKA 24:3 Vakapinda vakashaiwa mutumbu waShe Jesu.
Apa ndipo pega pakataurwa kuti “Ishe Jesu” mumaBhuku mana eEvangeri. Izvi zvakazoitika amuka kubva kuvakafa.
Kukoshesa kuisa zita rechinzvimbo pazita remunhu kunokudza tsika dzavaNikoraiti, kusimudzirwa kwemunhu mutsvene pamusoro peungano- inobva yangova ungano inoterera hutungamiri hwemunhu. Shoko rekuti “raiti” harisi muBhaibheri. Ungano inozviwisira kumunhu anotungamirira haisi pakuita kwekereke yeTestamente Itsva.
KunaVaroma Chitsauko 16 Pauro anokwazisa maKristu 27 achitaura mazita avo chete, pasina zvinzvimbo zvakataurwa.
Saka musaisa zita rechinzvimbo muchiribatanidza nezita remunhu.
Chero zita rechinzvimbo rekuti “hama”, risina chakaipa charinokonzeresa sezvo richiburitsa pachena kuenzana kwevatendi , rakashandiswa kashanu chete muTestamente Itsva. Kaviri chete ndipo parakashandiswa paitaurwa nemunhu. Ananiasi akati “hama Sauro” paaitaura naSauro. Iyi ndiyo yega nguva muTestamente Itsva pakataurwa kumunhu achidaidzwa kuti “hama” rakabatanidzwa nezita rake.
MABASA 9:17 Ipapo Ananiasi akaenda akapinda mumba, akaisa mavoko ake pamusoro pake, akati: Sauro, hama, Ishe Jesu, wakazviratidza kwauri munzira yawakavuya nayo, wakandituma, kuti uvone zve, uzadzwe noMweya Mutsvene.
MABASA 22:13 Akavuya kwandiri, akamira, akati kwandiri: Sauro, hama, chivona! Nenguva iyoyo ndikamuvona.
Pamwe pazvakataurwa patatu Pauro naPetro vaitaura nevanhu vachitaura mumwe munhu kuti hama.
I VAKORINTE 16:12 Zvino kana ari Aporo, hama yedu,
VAHEBERU 13:23 Ziva kuti hama yedu Timotio wakasunungurwa;
II PETRO 3:15 Muchiti moyo murefu waShe wedu ruponeso; saPauro hama yedu inodikanwa, akakunyorerai vo nukuchenjera kwaakapiwa pamusoro pezvinhu izvi
Saka musazodaidza munhu nekudaidza kunodarika kwekuti “hama Nhingi” kana muchitaura nevanhu. Zvimwe zvinzvimbo zvese zvingabatanidzwe nemazita evanhu hazvisi muMagwaro, zviri muchiNikoraiti (kutapa kana kupamba ungano kana sangano).
Rangarirai muzvezve wenyoka painotimonerera, ichitipedza mweya zvishoma nezvishoma kusvikira tisisateveri chokwadi zvachose. Muzvezve wenyoka uripo kuti uve nechokwadi chekuti hatizodzoserwe kuchokwadi chekereke yekutanga yeTestamente Itsva.
Pauro akati tinofanira kutevera zvaakanyora iye nemamwe mapostora nevakanyora Bhaibheri nezvavakadzizisa.
VAGARATIA 1:8 Asi kunyange isu kana mutumwa unobva kudenga, akakuparidzirai imwe evangeri, inopesana neyatinokuparidzirai isu, ngaave wakatukwa.
Asi mumashure maizvozvo, hakuna Magwaro muTestamente Itsva anoti tinofanira kuzviwisira kumunhu. Hakuna pakanyorwa muTestamente Itsva kuti tinofanira kuzvininipisa kumufundisi kana pasita.
Tinofanira kuzvininipisa kana kuzviwisira chete kuShoko raMwari.
I PETRO 5:5 Saizvozvo imi vaduku muzviise pasi pavakuru, nemi mose pfekai kuzvininipisa mumwe kunomumwe, nokuti Mwari unodzivisa vanozvikudza, asi unopa nyasha vanozvininipisa.
Tese tinofanira kuzvininipisa kuMagwaro ose, zvisinei neativerengera, semaKristu tinofanira kudzokorora zvakanyorwa muBhaibheri, kuti mamwe maKristu aterere. Havazviwisiri kune averenga Bhaibheri, asi vari kuzviwisira kune zvataurwa neBhaibheri.
VAKOROSE 2:20 Zvino kana makafa pamwe naKristu kune zvokuvamba zvenyika, munozviisireiko pasi pemirairo, somugere munyika,
21 (Mirairo inoti: Usabata, usaravira, usagunzva
22 Izvi zvose zvinofanira kuparadzwa kana zvobatwa nazvo;) muchitevera mirairo nedzidziso dzavanhu?
Hatitenderwi kuteerera “mitemo yemakereke’ yakaitwa nevanhu.
Ngatitarisei mufananidzo wembeu yemastarda. Yakatanga iri duku kwazvo, pachinzvimbo chekukura kuita kakwenzi, yakaramba ichingokura. Izvi zvinoita sesero regomarara rinongokura nekuti rinongoda kukura. Handiwo makuriro anofanira kuita zvinhu. Zvinhu zvese zvinokura zvinofanira kuva nemuganhu wazvo.
MATEO 13:31 Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo, achiti: Vushe bwekudenga bwakafanana netsanga yemastarda, yakatorwa nomunhu, akaidzvara mumunda make;
32 Iyo iduku kumbeu dzose, asi kana yakura, ihuru pamirivo yose, inoita muti wakakura ukadaro kuti shiri dzokudenga dzinovuya, dzichigara pamatavi awo.
MATEO 13:3 Ipapo akavavudza zvinhu zvizhinji nemifananidzo, akati: Tarirai mukushi wakabuda kundokusha;
MATEO 13:19 Kana munhu akanzwa Shoko rovushe, asingarinzwisisi, wakaipa anosvika, ndokubvuta chakakushwa mumoyo make, ndiye wakakushwa panzira.
Saka shiri dzinomiririra mweya yakaipa mumifananidzo iyi.
Muti wemastarda wakareba mafitsi mana, asi dzimwe ndudzi dzawo dzinosvika mafiti masere kana gumi (mamita matatu). Asi kunyange miti mihombe iyi haina mapazi akasimba angatakure kurema kweshiri dzinoda kugara nekuita matendere adzo imomo.
Saka muti wemastarda wakakura zvisina kuita zvakanaka, nemapazi awo akazara shiri, zvinomiririra kereke yakakurisa, isingateveri Magwaro zvakazara yakavakwa nehutungamiri hwevanhu. Kereke yekutanga yaisanganirana mudzimba. Mwari haana kubvira ada kuti kereke ikurise.
Zvino mirairo inobva kumusoro ichidzika inobva yatora nzvimbo, kereke inobva yaenda nenzira inosarudzwa nevanhu. Mari, huwandu, nekubata kwemapato kunobva kwava kiyi yebudiriro kwavari. Mazano akangwara anobva aberekwa kereke yobva padzidziso dzevapostora. Kereke inotanga iri duku mukutenda yokura kuva huru kwazvo zvoita kuti itevere mazano nemifungo yevanhu vanotungamirira. “Kereke yangu yakakura uye iri nani pane yako”. ChiKristu chemakwikwi chinobva chapindira - hachina kuita zvakanaka.
Saka mapato aya emakereke emasanano akatanga mumashure megore 312 AD, apo Constantine akamisa kuuraiwa kwemaKristu akaenderera mberi pakuzivisa chimwe chinhu chakaipisisa, “chekupamba” kereke. Kuita kwemasangano emakereke ekutonga kwevari pamusoro vachitonga vanhu vari pasi pavo kunogonesa vanhu kuzikudza vari muzvikamu zvepamusoro zvezvigaro zvemukereke, vachiita chokwadi chekuti vanhu vanobviswa kuShoko raMwari rakawanda racho. Vanopihwa zvishoma kuti vagare vachifara muzvikamu zvehukama hwemumwe nemumwe wavo naMwari, asi vachivigirwa zano raMwari guru rekudzosera kereke yenguva yekupedzisira pakutenda kwekereke yekutanga yevapostora. Hutungamiri hwevanhu hunozotonga kereke munhorondo. Nhasi vanotenda kuMharidzo vanoita nhaurirano pamusoro pezvakabatwa paitaura vanhu munzvimbo dzinotongwa nemapasita. Vakabva zvakanyaya pakuita kwekereke yekutanga.
Shiri dzinoshandiswa semufananidzo wezvakaipa apo Babironi rinodaidzwa kuti nhare yeshiri dzose dzinetsvina dzinovengwa.
ZVAKAZARURWA 18:2 Akadanidzira nenzwi guru, achiti: Rawa, Rawa, Babironi, guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa nenhare yomweya yose yetsvina, nenhare yeshiri dzose dzinetsvina dzinovengwa.
Saka Ishe anotiita kuti tizive kubva pamufananidzo uyu kuti kereke yaizoratidza shanduko huru nekukasika, kubva pakuita kwayo kwekutanga yaizokura kuita bato renyika nekurudziro dzayo.
Asi muti wemastarda wakakura zvekugona kuchengeta shiri pachawo here? Kwete.
Saka uyu hausi muti wemastarda watinorima. Rudzi rwezvemweya.
Kereke yaive isina kunzi ichakura kuita bato guru.
Pakangoitika izvi, vanhu vane shungu vanotungamirira vakatora simba nezvinzvimbo zvakasimudzirwa tsika dzavaNikoraiti dzikaberekwa. Vanhu vatsvene vakasimudzirwa pamusoro pevanhu. Iri harisi zano raMwari.
Sezvo shiri dzakataurwa muhuzhinji, pamwe tinofanira kudziona sevatumwa vaSatani, midziyo yaanoshanda ari mairi, achiita basa rake rakaipa.
Muti uyu unopa bvute, uchidzikatira chiedza chezuva chakawanda. Shiri, dzataona kuti ndivo vatumwa vaSatani, dzinoda kwazvo kugara mubvute. Ndivo vatungamiri vakasimudzirwa.
“Kugara mubvute” uku kunovaita mapofu ivo nevanovateerera kuti vasaone chokwadi chaMwari.
Nemufananidzo uyu, Jesu aitiyambira pamusoro peizvi kuti tigadzirire kutarisira makereke makuru, ane mapazi munzvimbo zhinji, kwete kereke yaakatanga iye.
Vatumwa vewakaipa, vatungamiriri, vanoziva kwazvo kuviga chokwadi nekuchengeta vanhu vari pasi peminwe yavo. Vanhu havachadzidza chokwadi zviri nyore kubva muShoko raMwari, nekuwadzana mumakereke epanzvimbo mudzimba.
VAROMA 16:5 Ndikwazisireiwo kereke iri paimba yavo.
VAKOROSE 4:15 Ndikwazisireivo hama dziri Raodikia naNimfa, nekereke iri mumba mavo ...
FIREMONI 1:2 NokunaApfia, hanzvadzi yedu, nokunaArkipo, murwi pamwe chete nesu, nokukereke iri mumba mako.
Pasi peSungano Itsva, hakuna nzvimbo dzinoyera
JOHANE 4:21 Jesu akati kwaari: Mai, titende kuti nguva inovuya, yamusingazonamati Baba pagomo iri, kana paJerusarema.
JOHANE 4:23 Asi nguva inovuya, nazvino yatova’po, yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, nokuti baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata.
Mufananidzo wembeu yemastarda ndewekuti kutenda kwekutanga kwakadyarwa naJesu kwaizoshandurwa kuita bato guru, rakaitwa nevanhu nepfungwa dzavo rinozoshandiswa nevatumwa vaSatani kuchengeta vanhu vari murima, asi ivo vachifunga kuti sangano ravari raive rekereke yechiKristu kwavanowana ruponeso rwavo. Ndicho, zvakadaro, chiKristu chiri murima chatinoona. Ndiwo makereke makuru ane kurudziro anoonekwa munyika nhasi. Iriva raSatani, kushandisa kwake kwaanoita tsumo yekuti “kana usingavakuriri batana navo’, anozviita nechinangwa chekuvaraura kuvaisa kurutivi rwake.
Akabudirira kunyengera vanhu vazhinji vachipinda muchiKristu chakan’ora sezvo kutadza ndiko kuri kukurira makereke.
MaKristu mazhinji nhasi vanoponeswa, vodakara havo vari mumakereke avanosarudza. Nekusaziva, kushaiwa kutya, ndicho chibereko chekuenda kukereke nguva dzose.
VAFIRIPI 2:12 .... Pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera.
Tinokanganwa kuti mukereke yekutanga vaive vashoma pakuverengwa, vari varombo pazvinhu zvenyika ino, uye vachizvidzwa nevapfumi vepasi pano vachinzi havana maturo uye vakaipa.
Kuita kwemakereke emasangano uku kuchiri nesu nhasi, kwakatevedzerwa nemakereke mazhinji eMharidzo anopikisa zvine simba kuti havasi vemasangano.
“Zvakanyorwa zvichinzi...” zvakunzwikwa pano neapo. Asi izvi ndizvo zvatinofanira kutenda mazviri.
“Muprofita akati ...” ndizvo zvakatora nzvimbo mumakereke emharidzo, sekuti ndiye “Izwi raMwari”.
Anofanira kuva izwi remutumwa wechinomwe, anotidzosera pakutenda kudzidziso yemadzibaba mapostora yakanyorwa muBhaibheri. Haaifanira kuunza chero imwe dzidziso itsva.
MATEO 23:2 Akati: Vanyori navaFarise vagere pachigaro chaMosesi;
Vatungamiri vezvitendero ivavo vairamba vachidzokorora zvakataurwa nemuprofita Mosesi setsime ravo resimba, ndivo vatungamiri vezvitendero vamwechete vakakurudzira maJuda kuramba Jesu, aive Shoko raMwari.
Vatungamiri vemakereke ivavo vakatora simba ravo kubva kune zvakataurwa nehama Branham vanorambawo vaya vanotaura zvinobva muBhaibheri.
Saka nhorondo inodzokororwa.
William Branham haatadzi here, kana kuti Bhaibheri ndiro Mukuru wedu here? Munofanira kusarudza.
62-1007 KIYI YEMUKOVA
Kuti, vanoti dzimwe hama kumusoro uko dzinoti ndakadzituma kumusoro ikoko, uye vari kuparidza kuti varume vanofanira kusiya vakadzi vavo votsvaga vakadzi vavo vemweya, uye kuti ini handitadzi zvachose. Kuti hakuna chinhu.... Uye, oh, nezvimwe zvinhu zvakaipisisa zvamusati mambonzwa.
63-1226 KURONGWA KWEKEREKE
Zvinofanira kuuya pamukuru wekupedzisira, uye mukuru wangu ndiro Shoko, Bhaibheri.
Hama Branham vakataura kuti vaive vasiri munhu asingatadzi. Vakataura kuti Bhaibheri ndiro Mukuru wedu. Saka torai zvavakataura mozvitsvaga kubva muMagwaro.
65-0725M VAKAZODZWA MAZUVA EKUPEDZISIRA
Saka tichaziva kutsigira izvi, kumberi nekumashure, neShoko; kwete nemifungo yevanhu, kana tsananguro dzavo. Handinei nekuti ndiyani; chero mumwe munhu, ini kana vamwe vanhu vose, “kana vasingatauri zvichibva pamurairo nevaprofita, hamuna chiedza maari.” mazviona? Ndizvo zvakataurwa neBhaibheri rakati, “Regai kutaura kwemunhu wese kuve nhema, kwangu kuve chokwadi,” zvisinei nekuti ndiyani.
Hakuna anogona kurwisa Bhaibheri.
54-0719 NZIRA YAMWARI YERUPONESO YATAKAPIWA
Urimi Tumimi yekuchiprista yakabviswa, asi iyi ndiyo Urimi Tumimi yechiprista yanhasi, Shoko raMwari. Kana muroti, kana muprofita, kana muparidzi, chero chinhu chinodzidzisa zvisiri muBhaibheri, zvakaipa. Muregei apomerwe.
Hakuna muprofita anotenderwa kudzidzisa zvakasiyana nezvinotaura Bhaibheri.
56-0426 JESU KRISTU ANOGARA AKADARO ZURO NHASI NEKUSINGAPERI
Kana chero munhu akadzidzisa chero chinhu chinopikisana neBhaibheri, handingachitendi. Mazviona, mazviona? Bhaibheri iri ndiro nheyo dzaMwari uye hakuna dzimwe nheyo dzingateiwe asi idzo dzakateewa kare, Kristu Jesu.
Kana zvisina kunyorwa muBhaibheri, musatenda mazviri.
58-0927 NEI TISIRI SANGANO KANA BATO
.... asi wese anonodzidzisa zvinopesana neBhaibheri muprofita wenhema
Zvinofanira kuva zviri, ZVANZI NAJEHOVA, ‘nekuti hazvisi sekuzvitaura ini zvichibva kwandiri nezvandinoziva, asi Shoko raShe ndiro ZVANZI NAJEHOVA. Uye pano shoko riri kutora zvarakandipa richizvibatanidza pamwechete richikuratidzai, kuti muzive pachenyu kuti ndizvo ZVANZI NAJEHOVA. Mazviona?
Tinofanira kutora zvaanotaura tozvidzosera kunozvitsvaga mumavhesi eBhaibheri. Muzvipupurire neMagwaro.
Kana mukataura chero chinhu chakasiyana neBhaibheri, munenge muri munzvimbo yemuvengi. Musazvidza vaya vanotaura zvakataurwa neMagwaro, naizvozvo vanopikisana nemi. Magwaro agara anotaura chokwadi.
NGUVA YEKEREKE YEEFESO- BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO 3
Zviri pano kunaVagaratia 1:8;
“Asi chero isu, kana chero mutumwa kubva kudenga, akaparidza rimwe evangeri kwamuri kupinda iro ratinokuparidzirai (nakare) munhu iyeye ngaapomerwe.”
Aive mupostora akaunza Shoko chairo repakutanga kuvanhu. Shoko rekutanga iroro haringashanduki, kwete donhwe kana mutswe pariri. Pauro aiziva kuti aive Mwari aitaura kwaari saka akati, “Chero ndikauya ndikaedza kukupai imwe zaruriro yechipiri, ndichiedza kushandura chero chinhu chiduku duku kubva pakutanga, ndisiyei ndipomerwe.” mazviona, Pauro aiziva kuti zaruriro yekutanga yaive yakanaka. Mwari haangapi zaruriro ozowedzera kwairi, sezvaakaita muMunda weEdeni paakavimbisa mukadzi kuti achamupa mwana, pamberi akazoti mwana iyeye aizouya kupfurikidza Abrahama, pamberi achibva azoti achauya nedzinza reropa rimwe iri kupfurikidza Davidi. Asi yaive zaruriro imwechete. Yakangopa vanhu ruzivo rwakati wandei kuvabatsira kuti vatambire nekunzwisisa zaruriro iyi.
Asi Shoko raMwari harishanduki. Mwana akauya sezvaive zvataurwa chaizvo. Hareruya. Tarirai kuti vaprofita venhema ava vaiita sei. Vakauya neshoko ravo vega. VaEfeso vaiziva Shoko iroro nekudzidziswa kwavaive vaitwa naPauro. Vaive vakazadzwa neMweya Mutsvene nekubatwa kwavaive vaitwa musoro naPauro. Vakatarisa vapostora venhema ivavo mumaziso vakati, “hamusi kutaura zvakataurwa naPauro. Saka nekudaro, muri, venhema.” Oh, izvi zvinotungidza moto mumoyo wangu.
Kudzokera kuShoko! Hamusirimi munoidza vapostora, nevaprofita nevadzidzisi, ISHOKO RINOVAEDZA.
Rimwe remazuva kuchauya muprofita kunguva yekereke yeRaodikia uye muchaziva kuti ndiye chaiye here akatumwa naMwari kana kuti kwete.
Hongu. muchaziva, nekuti kana ari waMwari ACHAVE ARI MUSHOKO IRORO CHAIZVO SEKUPIHWA KWARAKAITWA KUNAPAURO NAMWARI. HAANGABVI PASHOKO IRORO NEPADUKU POSE, KWETE CHERO KAMWE ZVAKO.
Munguva iyoyo yekupedzisira, pakuchave nevaprofita venhema vachanyuka, tarirai muone kuti vacharamba vachikuudzai kuti kana musingatendi ivo nezvavanotaura, mucharasika; asi kana MUPROFITA WEKUPEDZISIRA achisvika panzvimbo, kana ari ndiye muprofita iyeye, achadanidzira achiti, “Dzokerai kuShoko rakanyorwa kana kuti makarasika”.
Haangavaki pamusoro pezaruriro yake pachake kana tsananguro, asi paShoko raMwari. Amen, Amen!
Vapostora venhema ava ndivo mapere anoparadza vakataurwa nezvavo naPauro. Akataura achiti, “Kana ndaenda vachaedza kuuya vachitaura zaruriro dzakafanana; asi chinangwa chavo chinenge chisiri chekukubatsirai, asi kukuparadzai.”
Mabasa avapostora 20:27-32
Nekuti handina kusiya kutaura kwamuri simba raMwari.
Zvichenjerei imi neboka rose ramakaitirwa vatariri varo noMweya Mutsvene, kuti mufudze kereke yaMwari, yaakatenga neropa rake.
Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapere anoparadza achapinda pakati penyu, asingaregi boka.
Vuye, napakati penyu pamene pachamuka varume, vachataura zvinopesanisa, kuti vatsause vadzidzi vavatevere.
Naizvozvo rindai, murangarire kuti makore matatu handina kurega vusiku namasikati kuraira mumwe nomumwe nemisodzi.
Johane aizivawo nezvavo, zvakare, nekuti akati kuna 1 Johane 4:1
“...nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira (zvakatoitika) munyika”.
Kuti mweya waantikristu waive watanga kupindira mukereke, uye waizviita nekupikisa Shoko. Nei pano pari ipo pazvakatangira. Muno mukereke yekutanga chaimo.
Vaive vatotanga kuramba Shoko vachigadza zvavo zvitendero nezivo dzavo pachinzvimbo cheShoko raMwari.
Ndiwo mweya waantikristu, nekuti Jesu ndiye Shoko. Kuramba Shoko kuramba Jesu. Kuramba Shoko ndiko kuva antikristu nekuti Mweya neShoko chinhu CHIMWE.
Kana muchiramba shoko, munenge muri antikristu. UYE KANA ZVAKATANGA MUKEREKE YEKUTANGA ZVINOKURA KUSVIKIRA PAKUPEDZISIRA PAZVINOTORA CHIGARO.
Uye ndizvo chaizvo zvamuchaona patinotarisa nguva dzese dzemakereke. Zvakatanga zviri zviduku panguva yekereke yeEfeso zvikakura munguva imwe neimwe kusvikira anoramba-Shoko, kuita kwaantikristu kwatora nzvimbo uye kusatadza kweShoko kunobva kwatsiviwa nemupostora wenhema wekereke yenhema.
(Mashoko asina kubatwa paitaura munhu: Maprofita enhema anoti Shoko, Bhaibheri, harina kururama.)
Zvino zvinoita nyore kubata zvisiri izvo pane zvatiri kutaura nezvazvo nekuti ndiri kusimbisa izvi. Zvinoita sezvinonzwika kwamuri sekuti uya anoramba-Shoko, mweya waantikristu, anobva atsiva Shoko zvakazara, kusatenderana neBhaibheri kunokura mukurambwa kwaro. Kwete baba. Hazvisirizvo.
Zvimbori chii, ndizvo Zvakazarurwa 22: 18,19
"Ndinopupurira mumwe nomumwe unonzwa mashoko okuprofita kwebhuku iyi, ndichiti: kana munhu akawedzera pazvinhu izvi, Mwari uchawedzera kwaari madambudziko akanyorwa mubhuku iyi.
Kana munhu akabvisa mashoko ebhuku yekuprofita uku, Mwari achabvisa mugove wake pamuti wovupenyu, nomuguta dzvene, napazvinhu zvakanyorwa mubhuku iyi.”
Kushandura chero izwi RIMWE chete nekubvisa kana kuwedzera kwariri. Ndiko kunyengera kwekutanga kwaSatani muMunda weEdeni. Akangowedzera izwi rimwechete riduku duku pane zvakataurwa naMwari. Ndizvo zvakakonzeresa. Zvakaunza rufu nekuparadzwa. Uye paEfeso, zvaingova zvimwechete. Shoko rimwe rakawedzerwa, shoko rimwe rakabviswa, mweya wekuramba- shoko, mweya waantikristu ukatanga kukura.
Makereke makuru haasi mhinduro zvachose.
Ndiyo nzira yazvakaenda nazvo. Gore rekutanga rekereke yePentecosti, raive rakanakisa. Ipapo ipapo kwakabva kwauya kushungurudzwa mugore rechipiri vakaparadzirwa kwese kwese. Mugore rechitatu nerechina vakatanga kuwana vanhu, mapoka maduku: sekuti kwaive nevarume vashanu pamwe nevakadzi vana; ndiyo yaive kereke.
Muri kuona zvazvaive here? Zvaive saizvozvo nguva dzose. Mwari anotumira rutava rukuru rweEvangeri, anorukanda... Humambo hwedenga hwakafananidzwa nemunhu anoenda kugungwa achinokandira rutava. Paanodhonzera rutava rwake kunze, anowana zvese zvakawanda zvinenge- zvinenge zviri mugungwa. Anozviwana murutava rwake. Anowana hove; anowana hozhwa; ane madandemutande emumvura; anowana nyoka;anowana zvese.
Zvino, harisi basa redu sevaparidzi kuti titaure kuti, “Iyi ihove, ichi ndechocho.” Tinongoburitsa rutava rweEvangeri, hapazotore nguva refu vhuserere yoitika, vanhu vazhinji voponeswa vorumbidza Mwari. Asi tarirai, vamwe vavo ihove vamwe vavo i -, regai titi hozhwa. Hazvitore nguva refu kusvikira mati, “pamusoro pazvose ndaisatenda kuti kwaive nechimwe chinhu kwachiri.’ zvino uyo anomhanya achidzokera mudziva zvakare.
59-1004M NDIYANI UYU
Zvinondiitira zvakanaka kupinda mukereke duku seiyi matinova pedyo nepedyo. Ndakaropafadzwa, nenyasha dzaMwari, kuti nditaure kuungano huru. Asi handingati ndichiri kuzvifarira, nekuti musangano wakanakisa wandati ndaita ndeapo patinenge tiine misangano miduku yemudzimba apo tinongo... ndinozvitsvagira chigaro ndoenda pakona, ndogara ndichisimuka pachigaro ichocho. Ndiine nguva yakanakisa yekuwadzana, apo vatsvene vanosangana pamwechete, uye “Apo pane vaviri kana vatatu vakaungana muZita rangu, ndichava pakati pavo,” ndicho chivimbiso. Zvisinei nekukura kwakaita kereke, Mwari akavimbisa kusangana nesu, uye achaita saizvozvo.